Hihena ve aho amin'ny bisikileta
Ny bisikileta dia mety ho fomba tsara hampihenana lanja, na vao manomboka ianao na mikasa ny hampiasa ny bisikiletanao ho fomba iray hanesorana sy hanovana
Ho bevohoka ve aho amin'ity tsingerina ity
Tena lonaka ianao amin'ny fotoanan'ny ovulation (rehefa mivoaka avy ao amin'ny ovaire ny atody), izay matetika mitranga 12 ka hatramin'ny 14 andro alohan'ny hanombohan'ny fadimbolana manaraka. Ity dia
Hanatanjaka ny tongotro ve ny bisikileta
Ny bisikileta dia manatsara ny fiasan'ny vatana amin'ny ankapobeny ary manatanjaka ny hozatry ny tongotrao nefa tsy manelingelina azy ireo. Izy io dia mikendry ny quads, glutes, hamstrings ary ny zanak'omby. Hatanjaka ve ny tongotro avy
Hanatanjaka ny lohaliko ve ny bisikileta
Ny zava-misy dia ny bisikileta dia fanatanjahan-tena tsy dia misy fiantraikany ary mety hahasoa ny olona voan'ny osteoarthritis. Ny fanazaran-tena isan'andro amin'ny bisikileta dia manampy amin'ny fanamafisana ny quadriceps sy ny fametahana eo amin'ny tongotrao
Valiny haingana: Hanalefaka ny tongotro ve ny bisikileta
Ny soa azo avy amin'ny fandoroana kalôria amin'ny bisikileta dia manampy amin'ny fanalefahana ny tongotrao, na dia mandoro kaloria manerana ny vatanao aza ianao. Mba hahazoana antoka fa mampiasa ny hozatry ny tongotrao ianao amin'ny fananganana fiaretana
Valiny haingana: Hihena vavony ve ny bisikileta
Fanontaniana: Hampihena ny tavy vavony ve ny bisikileta
Hampihena ny tavy ve ny bisikileta
1. Fitantanana lanja. Mampihena ny tavy amin'ny vatana ny bisikileta mahazatra, indrindra fa amin'ny hery matanjaka, izay mampiroborobo ny fitantanana lanja ara-pahasalamana. Ankoatra izany, hampitombo ny metabolismanao ianao ary hanorina hozatra, izay mamela
Fanontaniana: Hampihena lanja ve ny bisikileta
Previous 1 2 3 ... 26,498 Manaraka